ISTICMAARKU DADKAAGANA WAA KAA KAXEEYAA DADKIISANA KUUMA OGOLA IN AAD KA MID NOQOTO | Saadaal Media
ISTICMAARKU DADKAAGANA WAA KAA KAXEEYAA DADKIISANA KUUMA OGOLA IN AAD KA MID NOQOTO
May 9, 2018 - jawaab
Madaxweyne dawlad goboleedka juba land Axmed iyo madaxwaynaha dawlad goboleedka Puntland.
Waa laba nin oo ah masuul ahna siyaasiyiin kala hogaamiya laba maamul dawlad goboleed oo kamid ah dawlada fadaraalka ee soomaaliyeed. labada hogaamiye waxay leeyihiin xiriir saaxiibtinimo oo dhaw iyo wada shaqayn.waa arin wanaagsan in maamulada dalku is fahmaan oo wada shaqeeyaan tanoo dan u ah horu socodka dawlad nimada soomaaliyeed. Laakiin waxaan meesha ku jirin in laga gaabiyo u hogaan sanaanta dawlada dhexe ee fadaraalka ah oo masuulka ah guud ahaan dalka soomaaliyeed.
Dawlada dhexe ee fadaraalka ah tabar malaha iyo intee ayay xukumaan,waa afkaar shisheeye laga soo min guuriyay oo ka dhan ah qaran soomaaliyeed oo wada jira iyo dawlad shaqaysa dalkeena. waa ognahay dawladaha arinkaa wada oo hadafkoodu yahay in markii ay soo dhamaatay,sheekadii dagaal oogayaasha,sheekadii diinta lagu soo gabaday ee afka loo soo duubtay,ayaa loo badalay in dawlad goboleedayada laga ilaaliyo in ay u hogaan samaan dawlada dhexe oo maamul goboleed kastaa difaac ka galo halkiisa,kana shaqeeyo sidii meesha looga saari lahaa dawlad dhexe oo awood leh oo fadaraalka ah.
Isticmaarku ama guumaystuhu dadka maxkaxduu kala diriraa,dhaqaalaha ayuu kala diriraa,siyaasada ayuu kala diriraa,midnimada iyo wada jirka ayuu kala diriraa.Fadaraalka soomaaliya ay qaadatay maxuma marka si loo eego,laakiin wadada loo leexiyay oo ah dawlado yar yar oo leh madaxwaynayaal la dirira oo ka awood bata dawlada dhexe ee fadaraalka ah maha mid u cuntama maslaxada iyo dawladnimada dalkeena soomaaliya.
Dawlad kastoo fadaraal ah sida Ethiopia iyo kuwo farabadan waxaa dawlad goboleedyadu u hogaan san yihiin dawlada dhexe ee fadaraalka. halkaa dalkeena soomaaliya dawladii fadaraalka ahayd lagu haysto xataa siyaasadii dibada oo ay xaqa u lahayd taladeeda.
Dalka Ethiopia iyo Emaraatka waxaa ka dhexeeya heshiis ah in dakad ay hesho ethiopia taasoo ah BERBARA.Dawlada emaraatka dawlado reer galbeed ayaa adeegsanaya meelaha qaarkood.Arintana waa in soomaalidu aysan kadidin khamiis dheer ayaa loosoo xirtay,qaab ganaacsina waa lagu soo galay iyo waan idin caawinaynaa!! waxaana la qarinayaa fikirka iyo xeesha la damacsan yahay oo aykuwada socdaan Ethiopia iyo Reer galbeedkii shalayba ku qaatay SOOMAALI GALBEED oo reer galbeed uugu wareejiyay ethiopia hadana ragii unbaa wada socda carabkan khamiiska watana waa layska soo hormariyay si aad axsaabihii rasuulka aad ugu malayso.
Axmed madoobe iyo cabdi wali gaas ma arkaan hoga loo qoday soomaali. waxaa umuuqda oo ay run u qaateen sheekada ay ETHIOPIA IYO EMARAATKU uugu sheekeeyeen iyo shilimaanta lasiinayo.hadaba iyagu ma garan karaan waxa socda maxaa yeelay sheekada iyo shilinkaa cajab galiyay oo ay la dhacsan yihiin.
Labada masuul dan kama laha in soomaaliya ay dhibka ka baxdo oo ay noqoto dawlad jirta oo shaqaysa umada soomaaliyeedna helaan nabad iyo nolol.waxayna si buuxda gacanta uugu galeen dawladaha diidan in soomaaliya ay ka dhalato dawlad shaqaysa.
Markaad eegto deeganada ay labada madaxweyne maamulan jubaland iyo puntland,lacagtaa malaayiinta ah ee kasoo gasha shisheeyaha,markaad eegto dakhliga kasoo gala dakadaha iyo garoomada,markaad eegto canshuurta ay ka qaadan shacabka iyo ganaacsatada,waxaas oo lacag ah wax ay dadka dib uugu soo celiyeen wali lama hayo.hal iskool oo ay dhiseen iyo hal ceel oo ay qodeen lamahayo,ileen aadamuhu lacag kama ciilbeelo kamana dhargo!! waa laba bakhayl oo aan lahayn quurid markay helaan 10 malyan magartaan boqolkun kaliya masaakiinta u qaybiya ama ceel uugu qoda.
Labada madaxweyne waxaan leeyahay caano daatay dabadeed baa laqabtaa,war bal dib isugu noqdo oo dadkaad raacdeen dib u eega,shisheeye cadaw u ah soomaaliya meel idin gayn maayo dadkiinii iyo dalkiiniina waa idinka kaxeeyeen koodana idiinma ogola. taariikhda yaysan idiin galin kuwii hor istaagay sodon sano oo dhib ah oo dadka soomaaliyeed soomareen kadib kuwo ku noqday caqabad oo u diiday dawladnimadoodii oo hor istaagay iyagoo u khaadumaya cadawgii soomaaliyeed.
Dawlada soomaaliyeed iyadaa xaq u leh sida dawladaha kale in ay mawqif ka qaadato khilaafkii xulufada EMARAADKA IYO QADAR. Sida dawlado badan oo dunida iyo caraba leh waxay dawladeenu qaadatay go aan kii uugu fiicnaa oo ahaa dhex dhexaad,waa hadal dawladeed iyo go aan. dawladeenu ma oran waxaan raacsanahay labada dhinac mid kamid ah sida QADAR ama EMARAAT. Dawlada soomaaliyeed ee fadaraalka ah uma fakarayso madaxda xukuntaa sidaad u haysataan idinku siyaasada oo ah ninkii xoogaa shilimaan ah kuu soo tuura in aad daba nashlayso!! oo ku racdo calashaan shilimaan ayaan ka helay oo kaliya.
Idinku ma eegaysaan labadan dawladood ee islaamka ah haday is qabteen yaa gardaran? yaa gar leh? maxaa laysku hayaa? maxaa door ah oo inooga banaan oo aan ka qaban karaynaa? caqliga saliimka ah iyo cadaaladu waxay ina tusaysaa in aad dhex dhexaad ka ahaato,kana qay qaadato dhex dhexaadintooda taasoo ay ku dhawaaqday dawlada soomaaliya oo ay tiri waa in dalalka islaamku soo kala dhex galaan oo aynu dhex dhexaadino dhibka dhexyaala dawladahaan.
Idinku waxaad raacdeen dhinac oo ka eexateen dhinicii kale,hadaba gartan aad goyseen hadaan tiinaba idiin raacno suaashu waxay tahay,markaad gar qaadayso xaqu waxaa weeye in aad labadii dhinacba aragto,waraysato arinta khubaro usaarto oo aad inbadan baarto kadib halkay kula dhaafi waydo ood sax u aragto aad xukunto. waa hagaage goormaad kulmiseen oo gartaa qaadeen labada dawladood QADAR IYO EMARAAD? saw arinku maha nin baa idiin yimid shilimaan buu idin tusay intaas ayaad la qaylinaysaan sidaas weeye arinkiinu.
Mida kale hunguri xumada edeb daraad ku darsateen,Aabihiin ayaa arinkaan ku jira go aana qaatay,idinkoo wiilal yar yar ah maxaa keenay in odaygii oo rag la fadhiya oo xaajo ku jira aad feer ordaysaan saw caasinimo maha!? shaqadan yaa idiin dirsaday maba aha mid idiin taal ee miyaydaan wax kasayn? wax kalaba daayoo Ethiopidan dariska ahi waa dhex dhexaad odoogood ayaa gaaray go aan oo ah dawlada dhexe ee fadaraalka ethiopia majirto gabano sidiinaas feer ordaya. war see wax idinka yihiin maad wax iskula hartaan.
Waxaa is waydiin leh,miyaydaan ogayn in shacabka jubaland iyo shacabka puntland dawladoodu tahay dawladaa MOGDISHO fadhida ee ah dawlada dhexe ee fadaraalka soomaaliyeed? miyaydaan ogayn in labada shacaba ay raali ku yihiin ku qanacsan yihiin kuna faraxsan yihiin mawqifkaa dhex dhexaadnimo ee dawlada fadaraalku ka qaadatay khilaafka dawladaha khliijka. EMARAADKA aad amaanaysaan maxay u qabteen shacabka jubaland iyo puntland? hadayse idinka boorso lacag ah nin walba siiyeen maxaad kasiiseen shacabka? waa fariin idgniin ah hadaad wax kasaysaan waana lasoo dhaafay xiligii shacabka la afduubi jiray ee laga hor istaagi jiray dawladnimo soomaaliyeed.
EMARAADKU sawkan badayadii kuwareejinaya ethiopia ee gumaysiga noosoo raacay maha,emaraadku sawkan dawladayadii fadaraalka ee soomaaliyeed burburinaya maha,emaaraadku sawkan ciidamada lagu gumaado soomaali naga dhex samaystay maha,emaraadku saw kan araga gixisada dalkayaga ku beeray ee fangareeya maha,waxaan leeyahay ka hara isticmaarka is huwan ee dhagraya soomaaliya oo ah reer galbeed iyo ethiopia iyo emaraat.
Waxaan idin la jeclahay in aad dawladiina garab istaagtaan maanta,in aad difaacdaan diinta dadka iyo dalka in aad wax u qabtaan shacabaka aad u tihiin madaxda,oo danta guud ka shaqaysaan,si aad u liibaan taan aduun iyo aakhiraba.wali rajaan idinka leeyahay ee istoosiya idin ma jecli laakiin xagjir ma ihi waxaan qabaa in aad wanaaga kashaqayn karaysaan markaa fursad baan idin siiyay. waxaana danteenu kuwada jirtaa in maanta dawlada soomaaliyeed qofkastoo soomaali ahi dhiniciisa ka qabto oo ka dhiso.qiimo kalana nina yeelan maayo, ogaada sadex arimood uun hadii kale qiimo yeelan mayno waligeen.
1.Waxatahay qof islaam ah suni ah xajiso iska iloow firqo iyo kala qoqob diineed
2.Waxaa tahay dhalasho ahaan qof soomaali ah iska iloow qabiil iyo jifo iyo kala qoqob xajiso soomaalinimadaada kugu filan kufaan soomaalinimadaada iskula waynoow iyadaa kugu filan
3.Waxatahay qofka iska leh dhulkan quruxda badan ee soomaaliya iska diid kala qoqob iyo kala qaybin,gobolaysi. midnimo ogoow ku faan dhulkaaga soomaaliya
Waa Qalinkii Yuusuf Omar